Ekuvukeni Kwencwadi Enkulu AA | XperimentalHamid
Ku-Awakening Big Book AA
Mashi 16, 2020 by Qasim Khan
ngaphambi kokuthuthela Ekuvukeni ingxenye ye iNcwadi eNkulu ye-AA ake sixoxe nge-AA. I-Alcoholics Anonymous (AA) wuhlelo olususelwa emphakathini, olunobukhona bomhlaba wonke obenzelwe ngenhloso yokusiza, kulabo abanenkinga yokuphuza. Uhlelo lwe-AA lusiza abaphuza okungamahlalakhona noma abalinganiselayo ngokunikeza ontanga abathi emihlanganweni yansuku zonke nasezingxoxweni ezizungeze umqondo wokulutha umlutha basekele abalwa kanzima ukuze bazithibe.
Uhlelo lwe-AA lunikeza abesilisa nabesifazane indawo yokuhlangana ukuze babelane ngolwazi, balulame ngokuphelele kotshwala futhi balulame, ngaphandle kokubuyela kulo. Umqondo wonke wohlelo uhlanganisa inkolelo yokuthi ukuluthwa utshwala ukugula kungalawulwa, kepha akulawulwa.
Ozimisele ukuzuza kulolu hlelo uyacelwa ukuba abe nesifiso sokuyeka ukuphuza. Uma umuntu ethanda, khona-ke 12 uhlelo lwezinyathelo sisetshenziselwa ukufeza ukululama futhi silondoloze ingqondo.
Ekuvukeni: ikhasi lama-86 kuye kwelama-88 encwadi enkulu ye-AA
ikhasi elikhulu lencwadi 86 no-87
Ekuvukeni kuyindima evela ku INcwadi Enkulu ukuqala ekhasini 86 kuya ku-88, okugxilwe kulo ekuzindleni. INcwadi eNkulu ikhuthaza umfundi lapho evuka ukuba acabange ngamahora angama-24 alandelayo. Kusongela umfundi ukuthi acele uNkulunkulu ngokuthobeka ukuba aqondise imicabango, abahlanze ngezinhloso zobugovu, ngoba kusiza umuntu ukusula ingqondo yezisusa ezimbi nezezwe.
Uma kwenzeka ubhekana nezinqikiswano ezindabeni zansuku zonke, mayelana nokuthi yini okufanele uyenze nokuthi ungayenza kanjani, incwadi le yeluleka umfundi ukuthi acele ugqozi kuNkulunkulu, umcabango noma isinqumo futhi aphumule, izimpendulo zizofika ngokuqondile, ngaphandle kokuthola umzabalazo uhlangothi.
Ngokuzijwayeza, lezi kanye ngenkathi zizingela kuzoba yingxenye yokusebenza kwengqondo. Futhi Ngokuzijwayeza, ngokuhamba kwesikhathi, ukucabanga kuzoba kungaphezulu kokuphefumulelwe okuvela kuNkulunkulu. Kakhulu kangangokuba umuntu angathembela ngokuphelele kuye ngosuku oluthile.
Indlela engcono yokuphetha le nkathi yokuzindla, le ncwadi ithi, ngomthandazo ocela isiqondiso sesenzo sethu esizayo nokusisiza ukunqoba izinkinga zethu. Qhamuka kuNkulunkulu ukuze ukwazi ukulawula ukuzithanda kwakho futhi ucele uNkulunkulu ukuthi angasiguquli sibe ngabantu abanobugovu, kumele sikhumbule abanye njalo.
Uma kungenzeka umfundi ukhuthazekile ukuthi afake umndeni nabangane ukujoyina ukuzindla ekuseni.
Njengoba usuku luqhubeka endleleni yesikhathi, umfundi ucelwa ukuba ayeke noma nini lapho kunokungabaza nokukhathazeka, abese ecela imicabango nezenzo ezifanele ngokuthobeka. Ngemuva kwalokho kancane kancane umuntu uzokwazi ukulawula imizwa ukuthi ingathukutheli kakhulu, ikhathazeke, ibe yiziwula, ihluleke ukuzisizela. Kancane kancane, ukusebenza kahle kuzobamba, izifiso zezinto zezwe nezinto zethu kuzonyamalala njengoba umuntu engasazukuchitha amandla emizamweni yokuhlela impilo ukuze ihambisane neyakho.
Umlutha wotshwala ungumuntu ongaqeqeshiwe, ngakho-ke lo mbhalo wenzelwe ukunikela abantu uqobo entandweni kaNkulunkulu. Ngakho-ke leso siyalo singatholakala empilweni.
Umbhalo ovela kwiBig Book AA: Ikhasi 86-88 - "NGOKUVULA '
I-AA Big Book Ikhasi 86
Umbhalo wokuqala kusuka ku-The Big Book AA mayelana nokuzindla ngokushesha ngemuva kokuvuka ukuqala usuku unikezwa lapha ngaphansi.
“Ekuvukeni masicabange ngamahora angamashumi amabili nane azayo. Sibheka izinhlelo zethu zosuku. Ngaphambi kokuthi siqale, sicela uNkulunkulu ukuthi aqondise ukucabanga kwethu, ikakhulukazi sicela ukuthi kwehlukaniswe nokuzisizela, ukungathembeki noma izinhloso zokuzifunela. Ngaphansi kwale mibandela, singasebenzisa amandla ethu engqondo ngesiqinisekiso, ngoba phela uNkulunkulu usinike ubuchopho bokusebenzisa. Impilo yethu yokucabanga izobekwa endaweni ephakeme kakhulu lapho ukucabanga kwethu kususwa ngezisusa ezimbi.
Ngokucabanga ngosuku lwethu singabhekana nokungaqiniseki. Ngeke sikwazi ukuthola ukuthi iyiphi inkambo okufanele siyithathe. Lapha sicela uNkulunkulu ugqozi, umcabango onembile noma isinqumo. Siyaphumula futhi sikuthathe kalula. Asilwi. Sijwayele ukumangala ukuthi izimpendulo ezifanele zeza kanjani ngemuva kokuba sesizame lokhu isikhashana.
Lokho obekuyi-hunch noma ugqozi lwesikhashana kancane kancane kuba yingxenye yokusebenza kwengqondo. Njengoba singenalwazi futhi sisanda ukuxhumana noNkulunkulu, akunakwenzeka ukuthi sizogqugquzelwa ngaso sonke isikhathi. Singase sikhokhele lokhu kucabanga ngazo zonke izinhlobo zezenzo nemibono engenangqondo. Noma kunjalo, sithola ukuthi ukucabanga kwethu, njengoba isikhathi sihamba, kuzoba ngokwengeziwe endizeni yokuphefumlelwa. Siza ukuncika kukho.
Sivame ukuphetha isikhathi sokuzindla ngomkhuleko esibonisa ngawo usuku lonke ukuthi isinyathelo esilandelayo sizokuba yini, ukuthi sinikezwe noma yini esiyidingayo ukunakekela lezo zinkinga. Sicela ikakhulu ukukhululeka kokuthanda kwethu futhi siyaqikelela ukuthi asiziceleli thina kuphela. Singazicelela thina, noma kunjalo, uma abanye bezosizwa. Siyaqikelela ukuthi singathandazi izifiso zethu zobugovu. Abaningi bethu sichithe isikhathi esiningi benza lokho futhi akusebenzi. Ungabona kalula ukuthi kungani.
Uma izimo zivuma, sicela omkethu noma abangane bethu ukuthi bahlanganyele nathi ngokuzindla ekuseni. Uma singamalungu ehlelo lenkolo elidinga ukuzinikela okucacile kokusa, nathi sinakekela lokho. Uma kungewona amalungu ezinhlangano zezenkolo, kwesinye isikhathi sikhetha futhi sibambe ngekhanda imithandazo embalwa ebekiwe egcizelela imigomo ebesikhuluma ngayo. Kunezincwadi eziningi eziwusizo nazo. Iziphakamiso mayelana nalokhu zingatholwa kumpristi, umfundisi, noma urabi. Shesha ubone lapho abantu abakholwayo belungile. Sebenzisa lokho abakunikezayo.
Njengoba sidlula usuku esimisa kulo, lapho sikhungathekile noma singabaza, futhi sicela umcabango noma isenzo esifanele. Sihlala sizikhumbuza ukuthi asisahambi lo mbukiso, ngokuzithoba sizitshele kaningi usuku ngalunye ukuthi “Intando yakho mayenziwe.” Ngaleso sikhathi sisengozini encane kakhulu yenjabulo, ukwesaba, intukuthelo, ukukhathazeka, ukuzisola, noma izinqumo zobuwula. Siba nekhono ngokwengeziwe. Asikhathali kalula, ngoba asishisi amandla ngobuwula njengoba sasenza ngenkathi sizama ukuhlela impilo ukuze ivumelane nathi. ”
Izigaba Amabhuku Amathegi Book, Amathiphu Imeyili kwemikhumbi
Yiziphi izinyathelo eziyi-12 ze-AA ezivela kwiBhuku Elikhulu
Ezinye izindlela ze-AA (Alcoholics Anonymous)